ငရုတ်ဆီ | MyFood Myanmar
ငရုတ်သီး - Chilli | အချဉ်ရည် - Sauces
အနှစ် များများ ရစေရန် အစပ်ပေါ့သော်လည်း အသားထူသည့် ငရုတ်သီး အကြီးမျိုးကို သုံးထားပါတယ် ။ ပိုစပ်သော အရသာ ရလိုလျှင် Thai Chili (သို့) ကုလားအော်သီး ကဲ့သို့ စပ်သည့် ငရုတ်သီး များဖြင့် တွဲဖက် သုံးပေးနိူင်ပါတယ် ။
ငရုတ်သီးစိမ်း - ၃၅၀ ဂရမ် (လှီးပြီးနောက် ၂ ၁/၂ ခန့်)
ကြက်သွန်ဖြူ - ၁/၃ ခွက် (၈၀ ml)
ဆား - ၁ ဇွန်း (ထမင်းစားဇွန်း)
ရှာလကာရည် - ၆၀၀ ml
အချဉ် စိမ်ရန် အတွက် ငရုတ်သီး ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ၊ ဆား နှင့် ရှာလကာရည် တို့ကို သန့်ပြန့် သောပုလင်း ထဲထည့်ပါ ။
အဖုံးဖုံးပြီး ရာသီဥတု အပူ အအေး ပေါ်မူတည်၍ ၂ ရက် (သို့) ၃ ရက်ခန့် အခန်းအပူရှိန်ဖြင့် ထားပါ ။
အရမ်း ချဉ်သွားအောင် လုပ်ရန် မလိုပါ ။ အနံ့ ပိုမွှေးစေရန် အတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ငရုတ်ဆီ လုပ်ရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ
အချဉ် စိမ်ထားသော ငရုတ်သီး - ၂ ၁/၂ ခွက် ခန့်
အချဉ် စိမ်ထားသော ကြက်သွန်ဖြူ - ၁/၃ ခွက် (၈၀ ml)
ငရုတ်သီး စိမ်ထားသော ရှာလကာရည် - ၁ ခွက် (၂၅၀ ml) ခန့်
သကြား - ထမင်းစားဇွန်း ၃ ဇွန်း (သို့) မိမိ နှစ်သက်သလို ထည့်ရန်
ဆား - ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း (သို့) မိမိ နှစ်သက်သလို ထည့်ရန်
1. အချဉ် စိမ်ထားသော ငရုတ်သီး ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ၊ ငရုတ်သီး စိမ်ထားသော ရှာလကာရည် ၊ သကြား နှင့် ဆားတို့ကို အိုးထဲထည့်ကာ High Heat ဖြင့် အဖတ်များ နူးကာ ပုံပါအတိုင်း အရည် (ထမင်းစားဇွန်း ၄ ဇွန်းခန့်) လောက်သာ ကျန်သည်အထိ တည်ထားပါ ။
2. အရည်အကျန်များကာ ကြိတ်ပြီးနောက် ငရုတ်ဆီကျဲနေပါက မီးအေးအေးဖြင့် ပျစ်လာအောင် ပြန်တည်ပေးနိူင်ပါတယ်။
3. ပြီးလျှင် မိမိ အဆင်ပြေရာ ကြိတ်စက်ဖြင့် အရမ်းကြေညက် သွားအောင် ကြိတ်ပေးပါ ။
4. ကြေညက်သွားလျှင် ငရုတ်ဆီ များကို ဇကာခံပြီး တတ်နိူင်သမျှ ခြစ်ချယူပေးပါ ။ ဇကာ အပြင်ဖက်တွင် ကပ်နေသော ငရုတ်ဆီ များကိုလည်း ခြစ်ချ ယူပေးပါ ။
5. ရရှိလာသော ငရုတ်ဆီကို အပေါ့အငံ မြည်းကြည့်ပြီး လိုအပ်လျှင် ဆား နှင့် သကြား ထပ်ထည့်မွှေရော၍ အအေး ခံထားပြီးလျှင် ငရုတ်ဆီလေး သုံးဆောင်ရန် အသင့်ဖြစ်ပါပြီ ။
5. အသုံး မပြုသေးသော ငရုတ်ဆီကို သန့်ပြန့်သော ပုလင်းထဲ ထည့်ကာ အဖုံး ဖုံးပြီး ရေခဲသေတ္တာတွင် သိမ်းပါ ။
ကြက်ကင် ၊ ဘဲကင် လုပ်နည်း